Rabhoritari ziso washer
Kunyangwe muzvikoro kana muzvipatara, marabhoritari anodiwa, uye nyaya dzekuchengetedza dzakanyanya kukosha uye kunetsekana. Matanho echimbichimbi anonyanya kukosha kana makemikari akapfapfaidzwa netsaona pamuviri kana pameso. Laboratory eyewash zvakare yakakosha yekuchengetedza michina. Sezvo iri im ...
Basa rekukurumidzira kushambidza ziso rekugeza ziso
Vazhinji vanhu vangangoziva chimwe chinhu nezve eziso washer, asi ivo havazive zvakawanda nezvavo. Yeyewash chishandiso senge rudzi rwechengetedzo yekuchengetedza michina, dzakasiyana siyana, inogona kushandiswa munzvimbo dzakasiyana siyana, Bo Hua vagadziri vekugeza maziso vanotsanangura zvakadzama basa rekukurumidzira kusuka ...
Dzimwe nyaya dzinoda kutariswa nekomboni yemhando yekugeza maziso
Kune akawanda marudzi eanogeza maziso. Vagadziri vanosarudza iwo ekushambidza maziso akakodzera kune avo mafekitori zvinoenderana nemamiriro avo uye zvavanoda. Nekuda kwemhando dzakasiyana dzekushambidza maziso, dzimwe nzira dzekuchengetedza hadzina kufanana mukushandisa. Nhasi tave kuzozivisa iyo matte ...
Zviitiko zvinoshanda uye zvinoshanda zveBohua ziso washer
Bohua eyewash ine huwandu hwakasiyana hwekushambadza kwemaziso, ichipa chengetedzo yakanakisa. Kureba uye Angle yemeso eyeji yekugezesa zvakagadzirwa zvinoenderana nechikamu chechiso, uye mvura iri muchimiro cheaerosol uye zvinyoro kukomberedzwa. Kuti uite kuti uishandise nemazvo, Bo Hua Xiaobia ...
Kuziva kwekugadzirisa maziso
Shanghai Bohua inogadzira eyewash, inoshandisa R & D, kugadzirisa, kugadzirwa uye kutengesa kwe eyewash, nemapoka akapfuma uye epamberi michina. Bohua ziso rekugeza ziso, rinoshanda rekugeza maziso, rinopa yakanyanya kuchengetedzwa uye inodzivirira yechipiri kukuvara. Kureba uye kona yeziso ...